Tottenham Hotspur Oo Qandaraas U Soo Bandhigtay Xiddiga AC Milan Franck Kessie
HomeWararka CiyaarahaTottenham Hotspur oo qandaraas u soo bandhigtay xiddiga AC Milan Franck Kessie
September 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay u soo bandhigtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee AC Milan Franck Kessie heshiis uu sanadkii ku qaadanayo 8m (£ 6.8m) si uu ugu dhaqaaqo kooxda Premier League xagaaga soo aadan.
24 jirkaan ayaa qandaraaskiisa haatan ee San Siro waxa uu dhacayaa bisha June ee soo socota, kooxo badan oo ay ku jiraan Spurs, Chelsea iyo Liverpool ayaa weli lagu qiimeeyaa inay xiiseynayaan adeegiisa.
Warbixin dhawaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in Chelsea ay la xiriirtay wakiilada Kessie si ay miiska u saarto qandaraas, kaasoo aad uga qiimo badan midka uu haatan ka qaato Milan.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Spurs ayaa sidoo kale aad u xiiseyneysa xiddiga heerka caalami ee dalka Ivory Coast waxayna soo bandhigeen qandaraas ku kacaya 8m (£ 6.8m) sanadkii iyagoo rajeynaya inay ku qanciyaan inuu u dhaqaaqo Tottenham Hotspur Stadium.
Kessie wuxuu ku raaxeystay ololihii cajiibka ahaa ee 2020-21 kooxdiisii ​​Talyaaniga, isagoo dhaliyay 14 gool wuxuuna caawiyay lix caawin 50 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa safashadiisii ​​ugu horreysay ee xilli ciyaareedka cusub ka hor yimid Lazio kulan ka tirsan Serie A 12-kii Sebtember, dhanka kale, wuxuu soo muuqday 61 daqiiqo guushii 2-0 ee kooxdiisa ku gaartay gurigeeda.